(က)-မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် (SKD) စနစ်ဖြင်‌့ လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံကြသည်‌့ ပြည်ပကုမ္ပဏီပေါင်း မည်မျှရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်များ၏ (Quality Control) ကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းချုပ်ထား သည်ကို သိလိုခြင်းနှင်‌့စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည်‌့ စနစ် (SKD) ဖြင်‌့ လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံကြသည်‌့ ပြည်ပကုမ္ပဏီပေါင်းမည်မျှရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်များ၏ အရည်အသွေး ကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်မှု (Quality Control) ကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းချုပ်ထားပါသနည်းနှင်‌့ အနာဂတ်တွင် လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား (e Bus) များ စမ်းသပ်မောင်းနှင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မည်ကဲ့သို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ထားပါသည်ကို သိလိုခြင်းနှင်‌့စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိမော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၌ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တပ်ဆင်ထုတ်လုပ် သည်‌့ စနစ် (SKD) ဖြင်‌့ ပြည်ပမှကုမ္ပဏီများ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး ထုတ်လုပ်နေကြပါကြောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်သည်‌့ စနစ် SKD မှ အလုံးစုံတပ်ဆင်သည်‌့ စနစ် CKD သို့ ရောက်ရှိအောင် အစပျိုးဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ SKD စနစ်တွင် SKD-1 နှင့် SKD-2 ဆိုပြီး ထပ်မံခွဲခြားပြီးအလိုက် ယခုနောက်ပိုင်း SKD-2 စနစ်ကိုသာ အတည်ပြုတပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအနေဖြင်‌့ စက်ရုံထုတ်ကားသစ်ကြီးများ Brand New ကို စီးနင်းမောင်းနှင်ခွင်‌့ ရရှိကြမည်ဖြစ်သော်လည်း မူရင်းနိုင်ငံထုတ် အရည်အသွေးများနှင်‌့ ကွာဟမှုရှိ/မရှိ၊ ပေးချေရသော တန်ဖိုးများနှင်‌့ညီ/မညီ သိရှိရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင်‌့ မော်တော်ယာဉ် ကြံ့ခိုင်မှုအပိုင်းတွင် လုံခြုံစိတ်ချရမှုအပိုင်း (safety)၊ အင်ဂျင်စမ်းသပ်မှုအပိုင်း (Energy Testy) နှင့် ယာဉ်အောက်ပိုင်း ကြံ့ခိုင်မှု (suspension) အပိုင်းများကို မူရင်းနိုင်ငံများတွင် စနစ်တကျစမ်းသပ် စစ်ဆေးပြီးမှ စက်ရုံကနေထုတ်လုပ် ရောင်းချသည့်အဆင်‌့သို့ ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ တချို့နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ် မော်တော်ယာဉ်များသည် ချို့ယွင်းချက်များ တွေ့ရှိရသဖြင့် ပြန်လည်တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရခြင်းမျိုး ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် လာရောက်တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်သည့် မော်တော်ယာဉ်များကို အရည်အသွေးကြံ့ခိုင် ကောင်းမွန်မှုအဆင်‌့အတန်း (Quality Control) ကိုလည်း ဝယ်ယူသုံးစွဲသည်‌့ ပြည်သူများအနေဖြင့် သိရှိရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်မည့် လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား (e Bus) များအတွက် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ပြီး မည်ကဲ့သို့နေရာများတွင် စတင်သတ်မှတ် အသုံးပြုသွားမည်ကိုလည်း အများပြည်သူလူထုမှ သိရှိသင်‌့ပါသဖြင်‌့ မေးခွန်းနှစ်ခုဖြင့် မေးမြန်းလိုပါကြောင်း၊ မေးခွန်း (၁) အနေဖြင့် မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည်‌့ SKD စနစ်ဖြင်‌့ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်‌့ ပြည်ပကုမ္ပဏီပေါင်း မည်မျှရှိပြီး တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်သည်‌့ မော်တော်ယာဉ်များ၏ အရည်အသွေးကြံ့ခိုင် ကောင်းမွန်မှု (Quality Control) ကို ဝန်ကြီးဌာနက မည်ကဲ့သို့ ထိန်းချုပ်ထားပါသနည်းနှင့် မေးခွန်း(၂) အနာဂတ်တွင် လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား (e Bus) များ စမ်းသပ်မောင်းနှင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မည်ကဲ့သို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
ပထမမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် အချိန်တိုအတွင်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု အနည်းဆုံးဖြင့် ဈေးကွက်ဝင်ထုတ်လုပ်မှု စနစ်ဖြစ်သည့် SKD စနစ်ဖြင်‌့ စတင်၍ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ် လျက်ရှိနေကြပါကြောင်း၊ ယခုလိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် MIC ၏ ခွင်‌့ပြုချက်ရယူရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းခွင့်ပြုချက်များအတိုင်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ စုစုပေါင်းကိုးခုဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထားသူကုမ္ပဏီ ခုနစ်ခု စုစုပေါင်း ၁၆ ခုရှိပါကြောင်း၊
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့် မော်တော်ယာဉ်များ၏ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန် စေရေးအတွက် မော်တော်ယာဉ်နှင်‌့ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင်‌့ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင်‌့ ဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပြီး ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင်‌့ စစ်ဆေး၍ Certificate of Approval (CoA) များ ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို စိစစ်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိရာ ယနေ့အထိ SKD စနစ်ဖြင်‌့ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့် မော်တော်ယာဉ်စုစုပေါင်း ၃၇၀၀ စီးကို CoA များထုတ်ပေးခဲ့ပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် တင်သွင်းလာသော စက်အစိတ်အပိုင်းများသည် MIC ၏ ခွင့်ပြုအမျိုးအစား ဖြစ်ကြောင်း၊ မူရင်းထုတ်လုပ်သူ၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင်‌့ ကိုက်ညီကြောင်း၊ ပစ္စည်းအသစ် Brand New များ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သတ်မှတ်အုပ်စုများအတိုင်း တင်သွင်းမှုနှင်‌့ ကိုက်ညီကြောင်းစသည့် အခြေခံအချက် အလက်များနှင့်တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးခြင်း၊ မူရင်းထုတ်လုပ်သူ၏ Inspection Certificate (IC) အထောက်အထားများဖြင်‌့ စနစ်တကျစစ်ဆေးခြင်းနှင်‌့ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးမှသာလျှင် သတ်မှတ်စစ်ဆေးချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမှသာ CoA များကို ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ထို့အပြင် အသုံးပြုသည်‌့ စက်နှင်‌့စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း လိုက်နာမှုရှိ/မရှိ၊ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ၊ စက်များ၏တိကျ မှန်ကန်မှုနှင်‌့ အခြေအနေများအားလုံးကို ရှောင်တခင် စစ်ဆေး၍လည်း ကြပ်မတ်ထိန်းချုပ်ပေးလျက် ရှိနေပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှု ကနဦးကာလတွင် SKD စနစ်ဖြင်‌့ စတင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်‌့ မော်တော်ယာဉ်များ၏ လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များဖြင်‌့ စနစ်တကျ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်းနှင်‌့ လက်ရှိ SKD စနစ်ဖြင်‌့ ထုတ်လုပ်နေသည့် မော်တော်ယာဉ်များ ဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်မှုရှိလာပြီး ထပ်မံ၍ ဈေးကွက်အလားအလာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော မော်တော်ယာဉ်များအတွက် ပိုမိုတွက်ခြေကိုက်သည်‌့ CKD စနစ်ကို အနာဂတ်တွင် ကူးပြောင်းရေးကိုလည်း အားပေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယမေးခွန်းနှင်‌့ စပ်လျဉ်း၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများကို အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက အကျိုးတူပူးပေါင်းခြင်း Public Private Partnership(PPP) စနစ် ပီပြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သည့်နေရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင်‌့အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်များရယူပြီး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေပါကြောင်း၊ ထို့အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလည်း စီမံကိန်းနှင်‌့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ Project Bank သို့ Project Proposal များအဖြစ် ပေးပို့ညှိနှိုင်းပေးလျက် ရှိနေပါကြောင်း၊ သာဂရစက်မှုနယ်မြေရှိ အမှတ် (၁၄) အကြီးစားစက်ရုံ၌ နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးရှိထိရောက်စေမည်‌့ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများအနက် လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများ စတင်တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ခြင်းကို Green Power Myanmar Co.,Ltd. နှင့် ပူးပေါင်းပြီး နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင်‌့ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာအချက် အလက်များကို အသေးစိတ်အကြို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆင်သင်‌့စတင်နိုင်ရေးအတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆွေးနွေးသဘောတူညီချက် AoD ကို ၃-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြပါကြောင်း၊ အဆိုပါ AoD အရ Project Bank သို့ ပေးပို့ထားသော အချက်အလက်များ အတိုင်းသာ သဘောတူညီမှု ပြုခဲ့ကြပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်၍ တင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် သမားရိုးကျ Engine ဖြင့် မောင်းနှင်သော မော်တော်ယာဉ်များသည် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု များပြားခြင်းကြောင့် ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု အလျဉ်းမရှိသော လျှပ်စစ်ကားများကို တီထွင်အသုံးပြု လာနေကြပါကြောင်း၊ Electric Vehicle များကို အိမ်စီး Saloon ကားငယ်များမှာသာ အများဆုံး အသုံးပြုကြခြင်းကို လေ့လာတွေ့ရှိရပြီး လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများကို အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုနေသေးပါကြောင်း၊ လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် လျှပ်စစ် EV Saloon ကားများအနက် နာမည်ကျော်ကြားသော Nissan-leaf, Tesler, BYD, Hyundai နှင်‌့ KIA စသည့် ကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော ကားများသည် ယနေ့ကမ္ဘာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလျက် ရှိနေပါကြောင်း၊ ယနေ့အိမ်စီးကား ဈေးကွက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် EV Saloon ကားများသည် ကမ္ဘာ့ပထမအဆင်‌့တွင် ရပ်တည်လျက်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင် အချို့နိုင်ငံများက ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါနေကြပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် BYD အမျိုးအစားလျှပ်စစ် ဘတ်စ်ကားများဆိုလျှင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ဝင်ရောက်၍ နေရာယူနေပြီ ဖြစ်သကဲ့သို့ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံထုတ် EV ကားများသည်လည်း အိန္ဒိယနှင့်သီရိလင်္ကာ ဈေးကွက်များသို့ စတင်ဝင်ရောက် နေကြပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ CSEPLE Holding Ltd. နှင်‌့ ထုတ်လုပ်ထားသော MODULO Brand Electric Bus များကို ဥရောပနည်းပညာဖြင့် Green Power Myanmar Co.,Ltd နှင့် ပူးပေါင်းပြီး အမှတ် (၁၄) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ) မှ စတင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ကနဦးလေ့လာသုံးသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၎င်းလျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား များအတွက် Axle, Suspension, Steering, Brake, Drive, Motor, Battery နှင့် Control Unit များ၊ အားသွင်းစနစ်များနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဂျာမနီနိုင်ငံ ဒိမ်းမလားဘင့်ဇ်၊ ဆီးမင်းနှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံများမှ ရယူပြီးတပ်ဆင်ထုတ်လုပ် သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဓိကကျသည့် ဘတ်ထရီများကို ဥရောပနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ မှာယူအသုံးပြု သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားအမျိုးအစား Model (၃) မျိုး ထုတ်လုပ်သွားရာတွင် ကိုယ်ထည်မှာ Modular Type Composite Sturcture ဖြစ်၍ Dash Board၊ Trimming Parts ထိုင်ခုံများကို ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ပြီး အားဖြည့်မှန်များကိုလည်း ပြည်တွင်းတွင် ဆက်လက်ပြီး ထုတ်လုပ်ပြီး တပ်ဆင်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ယခုအခါတွင် CSEPLE Holding Ltd. အနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ Electric Bus အစီးရေ ၅၀၀ ကျော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင်လည်း ဥရောပနိုင်ငံတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေပါကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ သီရိလင်္ကာ၊ စင်္ကာပူ၊ ကမ္ဘောဒီးယားစသည့် နိုင်ငံများသို့လည်း အစီးရေ ၇၀၀၀ ကျော် တင်ပို့ရောင်းချရန် အမှာစာများ ရရှိထားပြီးဖြစ်သဖြင့် ဈေးကွက်ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိပါကြောင်း၊eBus များသည် Carbon ထုတ်လွှတ်မှု လုံးဝမရှိခြင်းကြောင့် Carbon အကျိုးခံစားခွင့် Carbon Credit ရရှိထားသောကြောင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ EXIM Bank မှ ငါးနှစ်သက်တမ်းကာလဖြင့် ကနဦး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ ပေးသွင်းပြီး ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၎င်းeBus များသည် မိုင် ၁၅၀ ကျော်အထိ တောက်လျှောက် မောင်းနှင်နိုင်မည့် Lithium Battery Pack များ တပ်ဆင်ထားပြီး Electronic Ticket ခေါ်သည့် (e-ticket) စနစ်များကိုလည်း တပ်ဆင်အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရေလုံစနစ် ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ရေလျှံလမ်းများတွင်လည်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ မောင်းနှင်အသုံးပြု နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို ပိုမိုထိရောက်သည့်အတွက် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင် များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ သက်သာခြင်း၊ ဘတ်ထရီ၏ သက်တမ်းတွင်လည်း ယခုအချိန်မှာဆိုလျှင် ရှစ်နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ထိသက်တမ်းရှည်ပြီး အလေးချိန်ပေါ့ပါး တန်ဖိုးလည်း သက်သာသည့်အတွက် တပ်ဆင်သည့် လျှပ်စစ်မော်တော်ကားများတွင် စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မော်တာများမှာလည်း သာမန်အင်ဂျင်များထက် ဆွဲအား၊ ရုန်းအားကောင်းမွန်ပြီး လည်ပတ်မှုညက်ညော၍ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် အထူးသက်သာခြင်းတို့ကြောင်‌့ တာရှည်ခံမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ကမ္ဘာ့ ကားဈေးကွက်တွင် သမားရိုးကျ Engine ဖြင်‌့ မောင်းနှင်အသုံးပြုသည့် Pick-up Truck ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုမှာ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသည် Pick-up ကားများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှု မဏ္ဍိုင် (Pick-up Hub) ဖြစ်သကဲ့သို့ EV ဈေးကွက်၏ ကနဦးကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း အာရှ၏အချက်အချာ နေရာမရှိခြင်းကြောင်‌့ များစွာနောက်ကျ ကျန်ရှိမနေဘဲ ဥရောပ၊ အာရှပေါင်းကူး ဗဟိုချက်မ EV Hub အဖြစ် ဝင်ရောက်ရောက် ရှိနိုင်မည်‌့ အ‌ခြေအနေအခွင်‌့အလမ်း ကောင်းများရှိ နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့်ကြောင်‌့ ဈေးကွက်လက်ဦးမှု ရယူနိုင်ရေးအတွက် ယခုမှစတင်၍ အခြေခံအဆောက်အဦများဖြင့် EV နည်းပညာများကို မျိုးစေ့ချပေးသွားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုအခါ ကြိုတင်စီမံ‌ဆောင်ရွက် ထားရှိသည်‌့အနေဖြင့် လျှပ်စစ်ကားများ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေသော Charging Station များကို ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး တစ်လျှောက် ရန်ကုန်မြို့နှင်‌့နေပြည်တော်တို့တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီနှင်‌့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့ Survey များ ပြုလုပ်ရန် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ရှစ်နေရာ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၃၆ နေရာ၊ နေပြည်တော်တွင် ငါးနေရာတို့ကို ပဏာမအားဖြင်‌့ လျာထား ရွေးချယ်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊
အဆိုပါ Charging Station များတွင် E Bus များကိုသာမက EV Saloon ကားများကိုလည်း Charging သွင်းနိုင်မည့် Charging ခေါင်းသုံးမျိုး ပါရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင်‌့ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကြိုတင်စီမံမှုများ စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင်‌့အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူ ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ထုတ်လုပ်ရန်လျာထားသည်‌့ E Bus အမျိုးအစား သရုပ်ပြစမ်းသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Green Power Myanmar Co.,Ltd. က လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားငါးစီးကို ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မကြာမီရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းယာဉ်များအတွက် Charging Station များကိုလည်း ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ EV Charging Station သုံးခုကို ကုမ္ပဏီစရိတ်ဖြင်‌့ သင့်တော်သည့် နေရာများတွင် အသင်‌့တည်ဆောက်နိုင်ရေးကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင်‌့ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေပါကြောင်း၊ ယခုအခါ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနရုံးအမှတ် (၄၁) အနီးတွင်ရှိသည့် Charging Station တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ရွေးချယ်ထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နေပြည်တော်လေဆိပ်၊ ဘူတာကြီး၊ ကားကြီးကွင်းနှင်‌့ဈေးကြီးများ စသည့်နေရာများတွင် ပြည်သူတို့သွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန် ရှေးဦးစွာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား ငါးစီးခန့်ကို ကနဦးစမ်းသပ် ပြေးဆွဲမှုများ ပြုလုပ်လိုပါကြောင်း ကုမ္ပဏီမှအဆိုပြုလာ၍ စမ်းသပ်မှုပြုနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင်‌့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင်‌့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပကတိအခြေအနေနှင်‌့ ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိကို လက်တွေ့ကျကျ တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မှန်ကန်စွာသုံးသပ်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင်‌့ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် မော်တော်ယာဉ် အမျိုးမျိုးကို ပြည်တွင်း၌ SKD စနစ်ဖြင်‌့ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုများအား safety အလေးထား၍ ဥပဒေနှင်‌့အညီ စိစစ်ခွင်‌့ပြုပေးလျက် ရှိပါကြောင်း၊ အနာဂတ်တွင် ကားဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုး လာပြီးနောက် SKD စနစ်မှ ပိုမို၍စီးပွားရေး တွက်ခြေ ကိုက်မည့် CKD စနစ်သို့ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင်‌့ တက်လှမ်းကူးပြောင်း နိုင်ရေးကိုလည်း စနစ်တကျ အားပေးကူညီ သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင်‌့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုလျော့နည်းပြီး ကာဗွန် ထုတ်လုပ်မှု လုံးဝမရှိသော နည်းပညာမြင်‌့လျှပ်စစ် ဘတ်စ်ကားများ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ကြိုတင် စီမံမှုများဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင်‌့အညီ တင်ပြဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။
ဦးစိုင်းငေါင်းဆိုင်ဟိန်း (မောက်မယ်မဲဆန္ဒနယ်) က ဆက်စပ်မေးခွန်း မေးမြန်းပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုကဏ္ဍပြုပြင် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မှုများကို ထောက်ခံကြိုဆိုပါကြောင်း၊ အဆိုပါနေရာတွင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ထုတ်လုပ်မှုအဆင့် (၅) ဆင့် တွင် ယခု SKD အဆင့်က အဆင့် (၄) စုဖွဲ့ တပ်ဆင်ခြင်း၊ Assembly စနစ်ဖြင့် Testing စမ်းသပ်ခြင်း၊ (၅) ဆင့်ကို စုပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အမှန်တကယ် မိမိတို့ကပစ္စည်း ၁၀ မျိုးစုပြီးမှ တပ်ဆင်သည့် စနစ် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ SKD စနစ်က တပ်ဆင်သည့်အဆင့် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ SKD မှ CKD ကို ပြောင်းနိုင်မှ မိမိတို့ကနည်းပညာ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရော ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အပြီးအစီးထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အဆင့်မျိုးရောက်ရှိရန်အတွက် SKD စနစ်ဖြင့် ပြည်တွင်းကိုလာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသော ကုမ္ပဏီအားလုံးလိုလို မိမိတို့နိုင်ငံတွင် SKD စနစ်မှ CKD စနစ်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြမည်လား။ ယခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်သည့်နေရာတွင် ဆက်လုပ်ချင်လည်း ရပါကြောင်း၊ မလုပ်ချင်လည်းရသည်ဆိုသည့် အခွင့်အရေးမျိုး နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်ပေးမည်လား၊ မေးခွန်း (၂) အနေဖြင့် SKD စနစ်မှ CKD စနစ်ကို ကူးပြောင်းရန်အတွက် မည်ကဲ့သို့ ကန့်သတ်မှုမျိုးများ ချမှတ်ထားပေးပါသနည်း။ ဥပမာ- အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား (ငါးနှစ်တန်သည်၊ ၁၀ တန်သည်၊ အနှစ် ၂၀ တန်သည်) ကူးပြောင်းမည်လား။ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းမှ ထွက်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်အစီး အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ပြီးမှ SKD စနစ်မှ CKD စနစ်ကို ပြောင်းခိုင်းမည်လား ဆိုသည်ကို ဆက်စပ်မေးခွန်း မေမြန်းပါသည်။
မော်တော်ယာဉ်များသည် သက်ဆိုင်ရာမူရင်း ထုတ်လုပ်သူနိုင်ငံကုမ္ပဏီမှ ၎င်းတို့၏ ပင်ကိုယ်ဒီဇိုင်းများဖြင့် တမူထူးခြားစွာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ပြိုင်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၎င်းထုပ်လုပ်ချက်အရလည်း ယခုမြန်မာနိုင်ငံကို ကုမ္ပဏီမျိုးစုံမှ ရောက်ရှိနေရာတွင် ယခုလက်ရှိ အခြေအနေဆိုလျှင် အားလုံးသိသည့်အတိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံအများဆုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ထုတ်သည့်အခါ အခက်အခဲရှိနေသည်မှာ အဆိုပါစက်ရုံကြီးများကို စနစ်တကျ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာ လိုပါကြောင်း၊ ၎င်းအတွက်ကို ယခု SKD ခေါ် Semi Knocked Down System ကို အသုံးပြုပြီး အမြန်ဆုံး ဈေးကွက်တွင် စတင်နိုင်ရန်အတွက်ကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ SKD (Semi Knocked Down) စနစ်၏ ယခင်သတ်မှတ်ချက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခင်က အုပ်စုကြီး ကိုးအုပ်စု ခွဲထားခဲ့ပါကြောင်း၊
တစ်ဖန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အုပ်စုကြီး ၁၀ ခုထိ တိုးချဲ့ပြီး မသမာမှုများ မရှိရစေရန်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကိုက်ညီအောင်စနစ်တကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး၊ စစ်ဆေးပြီး ၁၀ ခုကို စီမံခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ စီမံရသည့်အကြောင်းအရင်းက မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သည့်အခါ (၁) က မော်တော်ယာဉ်၏ အင်ဂျင်စက်သည် မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မထုတ်နိုင်သေးပါကြောင်း၊ ၎င်းအတွက်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မတတ်နိုင်သေးသည့်အတွက် အင်ဂျင်စက်များကို အလုံးလိုက် ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာ အလုပ်အကိုင် ရရှိစေနိုင်မည့် လုပ်ငန်းကကိုယ်ထည်တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ကိုယ်ထည်နှင်‌့ထိုင်ခုံများ အခြားသန့်စင်မှုများကို ပြည်တွင်းတွင်လုပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ကိုယ်ထည်ကို မည်ကဲ့သို့ထုတ်လုပ်မည်ဆိုသည့် ရည်မှန်းချက်သည် အဓိကဖြစ်နေပါကြောင်း၊ ကိုယ်ထည်ကို တစ်စီးလုံးပြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံကို တင်သွင်းလာရမည်လား သို့တည်းမဟုတ် ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်း အစအဆုံး တစ်ခုချင်းအသေးစိတ်က ဒီမှာစတင်တည်ထောင်သည့် စက်ရုံတွင် ထုတ်လုပ်နိုင်မည်လား ဆိုသည့်မေးခွန်းကို ဖြေရမည်ဆိုလျှင် မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးလုံး၏ ကိုယ်ထည်တွင် တပ်ဆင်ထားသော သံထည်ပစ္စည်းများသည် ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုး၊ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးများ က press mission ခေါ်သည့် ပုံဖိစက်ကြီးများနှင့် Design Moe များ မျိုးစုံသုံးပြီး ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ် အင်မတန်များပါကြောင်း၊ ၎င်းအတွက်ကို စောင်‌့နေမည်ဆိုလျှင် အချိန်ကာလအနည်းဆုံး သုံးနှစ်နှင့်ငါးနှစ်ခန့် ကြာမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အမြန်ဆုံးထုတ်လုပ် နိုင်ရန်အတွက်ကို မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်ကို တပ်ဆင်ပြီး တင်သွင်းခွင့်ပြု ထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါနေရာတွင် ကိုယ်ထည်ကြီး၏အပိုင်းတွင် အခြား၊ အခြားသေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများ များစွာပါဝင်သည့်အတွက် မည်သည်‌့အဆင်‌့ထိ ပါဝင်ခွင်‌့ရှိသည်၊ မည်သည်‌့အဆင်‌့ကမဖြစ်မနေ ယခုမြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်ဆင်ရမည်ဆိုသည့် အပိုင်းကို ခွဲခြားပေးရန်အတွက် အုပ်စုနံပါတ် (၁၀) ဖြစ်သွားသည့်အခါ ထပ်တိုးအုပ်စုအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ကိုယ်ထည်အတွင်း တပ်ဆင်သော ဖော့၊ အခြား Instrument Material ၊ ဝါယာကြိုးများကို ပြည်တွင်းတွင် တပ်ဆင်ပါ။ နိုင်ငံခြားပြည်ပမှ ဝါယာကြိုးထုပ်များ အပါအဝင် အခြားသော Crimping Pass များကို တင်သွင်းခွင်‌့ပြု၍ ပြည်တွင်းသာလျှင် တပ်ဆင်ပါဆိုပြီး မှာထားခြင်း ရှိပါကြောင်း၊ ယခုလို သတ်မှတ်ထားသည့် အတွက်လည်း ၎င်းအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နေကြသည့် ကုမ္ပဏီပေါင်း များစွာရှိပါကြောင်း၊ ယခုဆိုလျှင် ကိုးခုထိ ရှိနေပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများ ဆောင်ရွက်သည့်အခါ အရည်အသွေးကောင်းရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါကြောင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့် မူလပင်ရင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးကို မပြည့်မီမှာ စိုးရိမ်သည့်အတွက် ၎င်းပင်ရင်း ကုမ္ပဏီများမှလည်း ၎င်းတို့၏ ကုမ္ပဏီပုံရိပ်ကျဆင်းမှုကို လုံးဝမလိုလားသည့်အတွက် ၎င်းစက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများ၏ Inspection Certificate ခေါ် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းသည့် စနစ်များကို အသေးစိတ်စိစစ်ရပါကြောင်း၊ ၎င်းအတိုင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ အပါအဝင်ပူးပေါင်း အဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့၍ အသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီး ၎င်းတင်သွင်း ပစ္စည်းများသည် စနစ်တကျ MIC မှ ခွင့်ပြုထားသော ပစ္စည်းများဟုတ်/မဟုတ် အသစ်စက်စက် ဖြစ်ခြင်းဟုတ်/မဟုတ်၊ အခြား၊ အခြားသော အချက်အလက်များလည်း ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ အသေးစိတ်စိစစ်ပြီး ထုတ်လုပ်သည့်အတွက် အဆိုပါ ပစ္စည်းများသည် ယခုလတ်တလော ထုတ်လုပ်နေသော ကာလတွင် အားလုံးသည် စနစ်တကျ MIC ၏ ခွင့်ပြုချက်အတိုင်း သွားနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်က Safety ပါ။ Safety အတွက်ကို သက်ဆိုင်ရာ Suspension System Extra၊ တခြား Brake Stability String စသည့် အဆင့်ဆင့်များကို မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ မူရင်းကုမ္ပဏီ၏ စနစ်တကျစစ်ဆေးသည့် Inspection Certificate များကို အခါမလပ်ရှောင်တခင် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်မှုရှိမှသာလျှင် COA ကိုပေးပါကြောင်း၊ အကယ်၍များ မကိုက်ညီမှုများ တွေ့ခဲ့ပါက သက်ဆိုင်သည့်စက်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်စေပြီးမှ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခွင့် ပြုပါကြောင်း၊ ယခုလို ထုတ်လုပ်ထိန်းချုပ်ထားသည့် အတွက်လည်း အရည်အသွေးသည် နိုင်ငံတကာတွင် ထုတ်လုပ်သော အဆင့်အတိုင်းသာ ရှိနေပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီအင်ဂျင်နီယာချုပ်များမှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် ပူးပေါင်းအဖွဲ့နှင့် ထပ်ဆင့်စိစစ်ပြီး COA များ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုလိုထုတ်ထားသည့် အတွက်လည်း ထုတ်လုပ်သည့် မော်တော်ယာဉ် များသည် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းကုမ္ပဏီများမှ မူရင်းဒီဇိုင်းသည်ပင်လျှင် တစ်ခါတစ်ရံမှာ လက်တွေ့ဘဝတွင် သုံးစွဲသည့် နိုင်ငံ၏အခြေအနေပေါ်၊ ရာသီဥတုပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းငယ်ချို့ယွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါကြောင်း၊ ၎င်းအခြေအနေ ကိုလည်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတွင်ရှိသော သင်တန်းကျောင်း အသီးသီး၊ တခြားမိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများ၊ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ အသီးသီးနှင့်ပူးပေါင်းပြီး Workshop များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပညာပေးပြီး စစ်ဆေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ နောက်ပြီး Fee Record ခေါ် မော်တော်ယာဉ်များ အသုံးပြုသည့်အခါ ပြင်ဆင်နေရသည့် စနစ်များ၏ ချို့ယွင်းချက်များကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်လျက်ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများကိုလည်း အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုလို အကြောင်းကြားခဲ့သဖြင့် ယခင်က အတွေ့အကြုံအရ Air Connection မကောင်းသော စနစ်များ၊ အခြားအခြား ဘရိတ်ချို့ယွင်းမှု များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများကို တင်ပြတောင်းခံသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီက ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဖြစ်နည်းသော်လည်း အခြားနိုင်ငံများတွင် Factory Recall ခေါ် ရသည့် အဆင့်ထိရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ၎င်းအတွက်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများနှင့် အစဉ်မပြတ် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းလျက်ရှိပြီး အရည်သွေးထိန်းသိမ်း ပေးနေပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ Workshop ငယ်များတွင် တွေ့ရှိနေရသော ပြဿနာများကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ အစဉ်အမြဲလေ့လာ ဆန်းစစ်လျက်ရှိပြီး ယနေ့အထိ ကြီးမားသောပြစ်ချက်များ မတွေ့ရသေးပါကြောင်း၊ သို့သော် ဆက်လက်ပြီး စုံစမ်းနေပြီး အခက်အခဲများ မှားယွင်းစွာရှိခဲ့လျှင် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီး ပြုပြင်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နောက်တစ်ချက်က မော်တော်ယာဉ်၏ အတွင်းပိုင်းတွင် ဝါယာကြိုးများတပ်ဆင်မှု အင်မတန်ခက်ခဲပါကြောင်း၊ ကား၏အမျိုးအစား၊ Model အမျိုးအစား၊ ဖြစ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး အခက်အခဲဆိုတာ တိကျမှုအများကြီးလိုပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးသည့် စနစ်များကို ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ချက်ချင်းတပ်ဆင်အသုံးပြု၍ မရသေးပါကြောင်း၊ ဥပမာ မော်တော်ကား၏ ရှေ့လေကာမှန်တွင် ရေကျလာခဲ့လျှင် အလိုအလျောက် မော်တာများက လည်ပတ်ပြီး ရေသုတ်တန်က သုတ်ပေးရပါကြောင်း၊ ယခုလို စနစ်များသည် မှန်တွင် အာရုံခံစနစ်များ မျိုးစုံတပ်ဆင်ထားပါကြောင်း၊ ယခုလိုမှန်မျိုးကို ဥပမာပေးပြီး မှန်များကို Report ဖြင့်သာ စက်ရုပ်နှင့် တည်ဆောက်နိုင်သည့် အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုံမှန်ပစ်ကပ်ကားများ သကဲ့သို့ တပ်ဆင်၍ မရနိုင်ပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအခွန်အကောက်တပ်ဆင်မှု မှန်သည် တပ်ဆင်သည်နှင့် ပြည်ပတွင် တပ်ဆင်လာခြင်းများ မည်ကဲ့သို့ ကွာလဲဆိုတာကအစ အခွန်အကောက်မည် ပြန်လည်ပြီး ထိန်းချုပ် ပေးရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ Safety အတွက်ကလည်း မော်တော်ယာဉ်က တည်ငြိမ်မှု၊ ကောင်းမွန်မှုကိုလည်း စစ်ဆေးသည့်နေရာတွင် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခလုတ်နှင်‌့မော်တော် ယာဉ်များသည် စက်ရုံ၏အနေအထား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား၊ အကျယ်အဝန်းအနေအထား များကြောင့် စက်ကိုတကယ်တပ်ဆင် မောင်းနှင်သည့်အခါ Approving Touch Ground ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရှိပါကြောင်း၊ အလားတူ စက်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်ကို လမ်းပေါ်တက်မမောင်းဘဲ စက်ပေါ်တွင် မောင်းနေကြသည်များလည်း ရှိသကဲ့သို့ ၎င်းအချက်အလက်များကိုလည်း မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိကို တန်ပြန်ပြီး အချိန်နှင့်အလိုက် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ၎င်းအတွက်လည်း Quality နှင်‌့ ပတ်သက်၍ Safety အတွက်ကို မိမိတို့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ကမကထပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင်‌့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။